Higgs boson: ihe ọ bụ, njirimara na mkpa | Network Meteorology
Na ngalaba nke pipụtisị physics, a na-anwa ịmụ usoro nke usoro mbara igwe sitere. N'ihi nke a, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta Higgs 'Boson. Ọ bụ elementrị elementrị nke ndị sayensị chere na o nwere ọrụ gbara ọkpụrụkpụ n’amata etu eluigwe na ụwa siri malite. Nkwenye nke ịdị adị nke ụwa bụ otu ebumnuche nke Nnukwu Hadron Collider. Ọ bụ ihe ngwangwa kachasị ike na ike niile n'ụwa.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị na ihe bụ Higgs boson, kedu njirimara ya na etu o si dị mkpa.
1 Mkpa nke Higgs boson
2 Ọrụ usoro
3 Nchọpụta Higgs boson
4 Uru maka ọha mmadụ
Mkpa nke Higgs boson
Ihe dị mkpa nke Higgs boson bụ na ọ bụ naanị otu ihe nwere ike ịkọwa mmalite nke ụwa. Modelkpụrụ nke ihe ọmụmụ fisikal na-akọwapụta ihe elementrị ndị ahụ niile yana mmekọrịta ha na gburugburu ha gbara. Agbanyeghị, akụkụ dị mkpa ka ga-akwado, nke bụ ihe nwere ike inye anyị azịza maka mbido igwe mmadụ. Ekwesiri iburu n'uche na oburu na idi nke igwe nke ihe nile nke elu uwa nile mere ihe di iche na nke ayi mara. Ọ bụrụ na elektrọn enweghị uka Atọm agaghị adị na ihe agaghị adị ka anyị siri mara ya. Ọ bụrụ na uka, a gaghị enwe kemịkal, bayoloji, na ihe ọ bụla dị ndụ agaghị adị.
Iji kọwaa mkpa ihe a niile dị, British Peter Higgs na 60s zigara na enwere usoro a maara dịka ubi Higgs. Dị nnọọ ka photon bụ ihe dị mkpa mgbe anyị na-ezo aka na magnetik na ọkụ, mpaghara a chọrọ ka ịdị adị nke prọlị nwere ike ide ya. Nke a dị mkpa nke mkpụrụ a ebe ọ bụ ọrụ maka ime ka ubi ahụ rụọ ọrụ.
Anyị ga-akọwa ntakịrị otu usoro ọrụ Higgs si arụ ọrụ. Ọ bụ ụdị nke ịga n'ihu na-agbasa na mbara igwe ma mejupụta ọnụọgụgụ nke Higgs bosons. Ọ bụ oke ihe ahụ ga - akpata esemokwu na mpaghara a, yabụ enwere ike kwubie na niile ahụ nwere a ukwuu esemokwu na a ubi nwere ukwuu uka.
Odi otutu n’ime anyi amaghi ihe bu boson. Iji ghota ihe ndi a nile karie nke oma, anyi ga enyocha ihe bu boson. E kewara ihe ndị ọzọ subatomic na ụdị abụọ: fermions na bosons. Ndị nke mbụ a na-ahụ maka ịhazi okwu a. Ihe anyi maara taa bu fermily. N'aka nke ọzọ, anyị nwere bosons ndị nwere ọrụ maka iburu agha ma ọ bụ mmekọrịta nke ihe dị n'etiti ha. Nke ahụ bụ, mgbe ihe nwere ike imekọrịta n'etiti otu na nke ọzọ, ọ na-akpa ike ma na-ekpebi nkuchi.
Anyị maara na ihe ndị mejupụtara atọm bụ elektrọn, proton na neutron. Ihe ndị a so na atom bụ fermions, mgbe photon, gluon, na W na Z bosons nwere ikike maka ikike electromagnetic n'otu n'otu. Ha na-ahụkwa maka ikike nuklia dị ike na nke adịghị ike.
Nchọpụta Higgs boson
Enweghi ike ihu Higgs boson ozugbo. Ihe kpatara nke a bụ na ọ bụrụ na ntisa ya amalite na ọ na-adị ngwa ngwa. Ozugbo ọ gbasara, ọ na-ebute ihe elementrị ndị ọzọ anyị maara nke ọma. Yabụ naanị anyị nwere ike ịhụ akara ụkwụ Higgs boson. Ihe ndị ọzọ nwere ike ịchọpụta na LHC. Inside na urughuru ome osooso protons ikukota ibe ha na a ọsọ dị nnọọ nso na nke ìhè. Na ọsọ a anyị maara na enwere nkwekọrịta na isi ihe dị iche iche yana enwere ike itinye nnukwu ndị nyocha ebe ahụ.
Mgbe irighiri ihe ndia gha agha ihu na agha, ha na emeputa ume. Ike dị elu nke ihe ahụ na-eme mgbe ha megidere, nke ka ụba karịa ihe ndị na-akpata nwere ike inwe. N'ihi na tiori Einstein guzobere eguzobeghi oke ya, kama a dịgasị iche iche nke ga-ekwe omume ụkpụrụ, elu-kwadoro urughuru accelerators na-achọrọ. Niile a nke physics bụ ókèala ọhụrụ inyocha. Ihe isi ike nke imata na ichoputa ihe ndi a bu ihe di oke oke ma di nkpa iji mezuo. Agbanyeghị, ebumnuche bụ isi nke ngwa ngwa ndị a bụ ịchọpụta Higgs boson.
Azịza nye ma Higgs boson mechara chọta ya akọwapụtara na ọnụ ọgụgụ. N'okwu a, ụkpụrụ dị iche iche na-egosi na enwere ike ị nweta nsonaazụ nnabata site na ndapụta kama ịbụ ezigbo mmetụta. Maka nke a, anyị kwesiri ị nweta uru dị oke ọnụ ahịa nke ọnụ ọgụgụ ma si otu a na-eme ka elele anya. Buru n'uche na nyocha ndị a niile chọrọ nyochaa ọtụtụ data ebe ọ bụ na ngwakọta ngwakọta ahụ na-ewepụta ihe dị ka nde 300 collisions kwa nke abụọ. Na nsogbu ndị a niile, data sitere na ya siri ike ịme.
Uru maka ọha mmadụ
Ọ bụrụ na mechara chọpụta Higgs boson, ọ ga-abụrịrị ọganiihu maka ọha mmadụ. Ọ bụkwa na ọ ga-akara akara na nyocha nke ọtụtụ ihe anụ ahụ ndị ọzọ dịka ọdịdị nke ihe gbara ọchịchịrị. Ihe gbara ọchịchịrị mara ihe mejupụtara 23% nke ụwa, mana akụrụngwa ya amachaghị. Ọ bụ ihe ịma aka maka ọzụzụ na nnwale na urughuru ome osooso.
Ọ bụrụ na achọpụtaghị Higgs boson, ọ ga-amanye iji chepụta echiche ọzọ iji nwee ike ịkọwa etu mkpụrụ ahụ si enweta oke ha. Ihe a niile ga - eduga na mmepe nke nnwale ọhụrụ nwere ike ikwenye ma ọ bụ gọnarị echiche ọhụrụ a. Buru n'uche na nke a bụ ụzọ sayensị si dị mma. Have ga-achọ ihe amaghi na nnwale ruo mgbe ị chọta azịza.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere Higgs boson na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » The Higgs boson
Ọwara nke California
Ebili mmiri ndọda